446s Ndichizvitengera iseya yemazino akatsva lamoned (mumaawa matatu chete heh) laminate-Edward Avila images and subtitles
Kupfuura Nhasi ~ ~ ~ ~ Shangu mbiri Pamwe chete naLeo Jay ~! ~ Chero ani Guys, munhu wese ~ Ini ndiLeo J. Dzidza Chirungu mazuva ano Saka toni yacho yakaita sebhoti Kuneta kwazvo uye kurara uye kudonha nekuda kwekushayikwa kwekurara izvozvi. Isu ikozvino Ndiri mune matatu-mazino mazino. Maawa matatu Ini ndaifunga kuti zvakanakira mazino angu ?? ㄴㄴ; Mazino ako anotaridzika chaizvo ?? Ini handina kunyatso kutaura izvozvo uye ndakangoti hazvina kuipa Akataura kuti aive akagwara uye yero Uye chii chimwezve iwe chawakati? Ndakati zvinoita seizvi Ndizvozvo? Ndakati hazvina kukwana mukati Ikozvino corona Saka, kuyedza Pfungwa iripo ndeyekuti iwe unokwanisa kukwira mumaawa matatu. Zvinoita sekunge zvichitora mamwe maawa matatu 3.5 maawa kiriniki Asi handizive kana paine mutsauko mukuru Handina kuisa pastel lipstick Iwe ukaisa izvi, mazino ako anozotaridzika morebvu Haha * Maybelline lipstick * Hahaha Kunge bhanana Kumeso kumeso Ndiratidze meno ako Pakati pako pane chena Yero pakupera Kupesana Zvakataurwa nachiremba Zvakapinza apa Uye rwonzi Haina kukakavara uye isina tsvina. Saka ndichaibata Uye kunyange ruvara rwemeno Kutanga pane zvese, ndakafunga kuti ndaifanira kugeda-geda meno angu ese Asi pano, mune yangu kesi Yakafanana nekadhi reDishing Diva chipikiri. Mushure mechinguva chidiki pane kunze kwemeno Zvishoma pamusoro kumusoro Pane kupfeka pfeni (ini handina kugona kuyeuka Korona) Nokutendeseka, ndinofunga kuti mazino ezasi ndiro dambudziko rakakura Ndinozviona kana ndichitaura Asi ndinofanira kururamisa? Ah, zvinoita sokunge kuunza miromo yemafuta Chinhu chinogadzirisa mazino chakafukidzwa neaya nyoro mukati, saka chinogara zvakanaka :) (That) * Anesthesia gel + mushure mechidimbu cheanesthesia Chitarisiko changu: Mumoyo mangu: Izvi zvisati zvaitika Uye izvi zvinotevera Zvinotyisa Inonzwa kunge mante matte ;; Ndinofunga ndinogona kuisa chimwe chinhu pazviri Zvinoita sekunge urikugadzira ma prosthetics izvozvi Ndibatsireiwo kusvikira zvaitwa ... ingogara ... Ndinofanira kungoenda kumba here? Asi hazvina kuenda Huru kuita chero zvaunoita kwemaawa matatu Gara kumashure muimba yekutandarira kana enda kunze kunotenga kana kudya chimwe chinhu Asi ini Ini ndoda kurara Chaizvoizvo Im Mune mamwe mazwi, maawa matatu haana kupfuura Maawa 7 apfuura Ndadzoka uye ndirikunzwa kutsva !!! Ndiri kunzwa kuchena uye yakajeka kristall ikozvino Chat Chii chakasiyana? Pave vhiki Iwe unonzwa kunge wangu izvozvi? Ndakajaira Pane kunzwa kuti chimwe chinhu chiri pameno ako Ndiri kuenda kuedza zvigadzirwa zvemiromo Iwe unogona kuona meno ari pasi pepasi Uye kana uchiongorora yepakutanga lip chigadzirwa Handina kuseka chaizvo. Saizvozvi Ini ndichatora ruvara rwakasimba ndoisa chimwe chinhu chinosiririsa mukati Kwete mukutevera chaiko Wadiwa Dalia Kuuya Edition Edu Lip Paradise Sheer Dew Tened Lipstick Olivia ruvara K-runako runotevera vanhu vazhinji Iwo mavara mavara ese mazita machena musikana Kunyangwe kana ichitaura kuti iruvara rwei, handizive kuti inowanzovei Ipapo iwe enda Olivia Brenda kana Sharot Wow ... Kupenya Ichi chionzi chinonzi Hens Iyi ndeimwe yemhando nyowani dzeK-runako Mazuva ano, vechidiki vanozvida 'Soft Kuda' ruvara Uku kusagutsikana Yakajeka yekotoni ink Yakapera beige tulips Iwo mavara ese akafanana. Pakupedzisira Ngatiende kune chimwe chinhu chinonakidza panguva ino. Ngatiitei izvi Sailor Moon ~! Sailor Mwedzi X Ruvara rwePopu Unganidzo 'Usagi' ruvara Hapana cancer mukati
Ndichizvitengera iseya yemazino akatsva lamoned (mumaawa matatu chete heh) laminate-Edward Avila
< start="0" dur="0.98"> Kupfuura >
< start="0.98" dur="3.72"> Nhasi ~ ~ ~ ~ Shangu mbiri >
< start="5.12" dur="1.7"> Pamwe chete naLeo Jay ~! ~ >
< start="6.82" dur="1.4"> Chero ani >
< start="9.2" dur="1.96"> Guys, munhu wese ~ Ini ndiLeo J. >
< start="12.86" dur="1.94"> Dzidza Chirungu mazuva ano >
< start="14.8" dur="2.24"> Saka toni yacho yakaita sebhoti >
< start="17.04" dur="4.5"> Kuneta kwazvo uye kurara uye kudonha nekuda kwekushayikwa kwekurara izvozvi. >
< start="21.54" dur="1.18"> Isu ikozvino >
< start="23.14" dur="1.62"> Ndiri mune matatu-mazino mazino. >
< start="27.2" dur="0.76"> Maawa matatu >
< start="28.36" dur="1.7"> Ini ndaifunga kuti zvakanakira mazino angu ?? >
< start="38.56" dur="1.68"> Mazino ako anotaridzika chaizvo ?? >
< start="40.24" dur="2.18"> Ini handina kunyatso kutaura izvozvo uye ndakangoti hazvina kuipa >
< start="42.42" dur="3.34"> Akataura kuti aive akagwara uye yero >
< start="50.16" dur="2.1"> Uye chii chimwezve iwe chawakati? >
< start="53.32" dur="1.2"> Ndakati zvinoita seizvi >
< start="54.52" dur="0.5"> Ndizvozvo? >
< start="55.02" dur="1.46"> Ndakati hazvina kukwana mukati >
< start="57.9" dur="0.9"> Ikozvino corona >
< start="58.8" dur="1.16"> Saka, kuyedza >
< start="59.96" dur="4.72"> Pfungwa iripo ndeyekuti iwe unokwanisa kukwira mumaawa matatu. >
< start="64.68" dur="1.96"> Zvinoita sekunge zvichitora mamwe maawa matatu >
< start="69.54" dur="1.86"> 3.5 maawa kiriniki >
< start="75.98" dur="3.42"> Asi handizive kana paine mutsauko mukuru >
< start="80.96" dur="1.98"> Handina kuisa pastel lipstick >
< start="85.38" dur="2.46"> Iwe ukaisa izvi, mazino ako anozotaridzika morebvu >
< start="107.12" dur="2.34"> Hahaha Kunge bhanana >
< start="109.46" dur="0.96"> Kumeso kumeso >
< start="114.96" dur="0.58"> Ndiratidze meno ako >
< start="117.46" dur="3.28"> Pakati pako pane chena >
< start="120.74" dur="1.56"> Yero pakupera >
< start="139.96" dur="1.32"> Kupesana >
< start="147.86" dur="1.3"> Zvakataurwa nachiremba >
< start="151.24" dur="1.4"> Zvakapinza apa >
< start="152.64" dur="1.94"> Uye rwonzi >
< start="156.06" dur="2.6"> Haina kukakavara uye isina tsvina. >
< start="158.66" dur="1.62"> Saka ndichaibata >
< start="160.28" dur="2.58"> Uye kunyange ruvara rwemeno >
< start="162.86" dur="6.38"> Kutanga pane zvese, ndakafunga kuti ndaifanira kugeda-geda meno angu ese >
< start="169.24" dur="2.16"> Asi pano, mune yangu kesi >
< start="171.4" dur="4.32"> Yakafanana nekadhi reDishing Diva chipikiri. >
< start="175.72" dur="2.12"> Mushure mechinguva chidiki pane kunze kwemeno >
< start="177.84" dur="1.82"> Zvishoma pamusoro kumusoro >
< start="179.66" dur="1.7"> Pane kupfeka pfeni (ini handina kugona kuyeuka Korona) >
< start="181.36" dur="3.5"> Nokutendeseka, ndinofunga kuti mazino ezasi ndiro dambudziko rakakura >
< start="184.86" dur="2.06"> Ndinozviona kana ndichitaura >
< start="186.92" dur="2.88"> Asi ndinofanira kururamisa? >
< start="189.8" dur="1.72"> Ah, zvinoita sokunge kuunza miromo yemafuta >
< start="194.98" dur="2.6"> Chinhu chinogadzirisa mazino chakafukidzwa neaya nyoro mukati, saka chinogara zvakanaka :) >
< start="197.58" dur="0.84"> (That) >
< start="204.7" dur="2.84"> * Anesthesia gel + mushure mechidimbu cheanesthesia >
< start="207.54" dur="1.6"> Chitarisiko changu: >
< start="209.14" dur="1.64"> Mumoyo mangu: >
< start="210.78" dur="1.64"> Izvi zvisati zvaitika >
< start="212.86" dur="1.12"> Uye izvi zvinotevera >
< start="214.76" dur="0.88"> Zvinotyisa >
< start="215.64" dur="1.74"> Inonzwa kunge mante matte ;; >
< start="217.38" dur="2.06"> Ndinofunga ndinogona kuisa chimwe chinhu pazviri >
< start="220.02" dur="1.94"> Zvinoita sekunge urikugadzira ma prosthetics izvozvi >
< start="222.52" dur="2.72"> Ndibatsireiwo kusvikira zvaitwa ... ingogara ... >
< start="225.24" dur="0.94"> Ndinofanira kungoenda kumba here? >
< start="226.18" dur="2.06"> Asi hazvina kuenda >
< start="228.24" dur="2.88"> Huru kuita chero zvaunoita kwemaawa matatu >
< start="231.12" dur="3.68"> Gara kumashure muimba yekutandarira kana enda kunze kunotenga kana kudya chimwe chinhu >
< start="234.8" dur="2.64"> Asi ini >
< start="237.44" dur="2.06"> Ini ndoda kurara >
< start="239.5" dur="0.94"> Chaizvoizvo Im >
< start="250.58" dur="2.32"> Mune mamwe mazwi, maawa matatu haana kupfuura >
< start="252.9" dur="1.98"> Maawa 7 apfuura >
< start="254.88" dur="3.12"> Ndadzoka uye ndirikunzwa kutsva !!! >
< start="275.68" dur="2.3"> Ndiri kunzwa kuchena uye yakajeka kristall ikozvino >
< start="310.02" dur="1.84"> Chii chakasiyana? >
< start="312.66" dur="1.12"> Pave vhiki >
< start="313.78" dur="2.14"> Iwe unonzwa kunge wangu izvozvi? Ndakajaira >
< start="315.92" dur="2.52"> Pane kunzwa kuti chimwe chinhu chiri pameno ako >
< start="318.44" dur="2.06"> Ndiri kuenda kuedza zvigadzirwa zvemiromo >
< start="320.5" dur="2.4"> Iwe unogona kuona meno ari pasi pepasi >
< start="322.9" dur="2.64"> Uye kana uchiongorora yepakutanga lip chigadzirwa >
< start="325.54" dur="2.44"> Handina kuseka chaizvo. >
< start="327.98" dur="1.04"> Saizvozvi >
< start="331.58" dur="3.18"> Ini ndichatora ruvara rwakasimba ndoisa chimwe chinhu chinosiririsa mukati >
< start="334.76" dur="1.16"> Kwete mukutevera chaiko >
< start="335.92" dur="4.08"> Wadiwa Dalia Kuuya Edition Edu Lip Paradise Sheer Dew Tened Lipstick >
< start="340.6" dur="0.8"> Olivia ruvara >
< start="341.4" dur="2.66"> K-runako runotevera vanhu vazhinji >
< start="344.06" dur="3.66"> Iwo mavara mavara ese mazita machena musikana >
< start="347.72" dur="2.64"> Kunyangwe kana ichitaura kuti iruvara rwei, handizive kuti inowanzovei >
< start="350.36" dur="0.68"> Ipapo iwe enda >
< start="351.66" dur="0.96"> Brenda kana >
< start="352.62" dur="1"> Sharot >
< start="361.08" dur="0.76"> Kupenya >
< start="372.2" dur="1.66"> Ichi chionzi chinonzi Hens >
< start="373.86" dur="2.18"> Iyi ndeimwe yemhando nyowani dzeK-runako >
< start="376.04" dur="2.9"> Mazuva ano, vechidiki vanozvida >
< start="378.94" dur="2.76"> 'Soft Kuda' ruvara >
< start="395.2" dur="1.52"> Uku kusagutsikana >
< start="396.72" dur="2.56"> Yakajeka yekotoni ink >
< start="399.28" dur="2.34"> Yakapera beige tulips >
< start="406.14" dur="1.92"> Iwo mavara ese akafanana. >
< start="420.9" dur="0.76"> Pakupedzisira >
< start="421.66" dur="1.32"> Ngatiende kune chimwe chinhu chinonakidza panguva ino. >
< start="422.98" dur="1.22"> Ngatiitei izvi Sailor Moon ~! >
< start="424.2" dur="2.54"> Sailor Mwedzi X Ruvara rwePopu Unganidzo >
< start="427.44" dur="0.88"> 'Usagi' ruvara >
< start="444.02" dur="1.92"> Hapana cancer mukati >